Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Indawo yeendwendwe » Ungayimisa njani ingxaki yevidiyo?
Isishwankathelo: Uninzi lwethu lusebenzisa ii-smartphones zethu kunye nezikhangeli zeelaptop emsebenzini kunye neenjongo zokuzonwabisa. Xa kuziwa kulonwabo, ukubukela iimuvi, iividiyo zeYouTube, kunye namabali evidiyo alayishiweyo kunye neereli kumaqonga oluntu adumileyo kukhetho lwethu. Kodwa ngaba ukhe wajongana nemicimbi yevidiyo xa usasaza umxholo kwi-intanethi? Ngaba asiyiyo eyona nto icaphukisayo? Ewe, akusekho! Eli nqaku liza kukuvumela ukuba ungene kwii-hacks ezimbalwa onokuzisebenzisa ukulungisa ngokulula imiba ye-buffering yevidiyo nakweliphi na iqonga.
Ukuba ubukela umxholo rhoqo kwi-intanethi, kuya kufuneka ukuba udibene nophawu oluthusayo lwevidiyo ngexesha elithile.
Eso sangqa sijikeleza rhoqo mhlawumbi yinto yokugqibela ofuna ukuyibona xa useluxolweni uzama ukonwabela imuvi ene-tub yepopcorn ngempelaveki.
Inokukonakalisa amava onke kuwe.
Kodwa ngaba ukhe wacinga ukuba kutheni isenzeka? Ewe kunjalo, isantya esicothayo se-intanethi sesinye sezizathu zokuba iividiyo zidlale nge-lags, kodwa ngaba kukho izizathu ezingakumbi emva komcimbi? Ngaphezu koko, ngaba ikho into onokuyenza ukuze uyiphelise? Sijoyine njengoko sikubonisa indlela yokuyeka iingxaki zevidiyo kube kanye.
Izinto zokuqala kuqala-Kutheni iividiyo zenza i-buffer?
Xa usasaza ividiyo ngokuthe ngqo kwi-intanethi, ividiyo ayigcinwa kwindawo yakho yokugcina kodwa kwiseva yelifu. Ikhutshelwa njengedatha ngexesha langempela kwaye idlalwe kwisixhobo sakho. Nakuphi na ukulibaziseka okanye ukuphazamiseka kukhutshelo kunokubangela ukuba ividiyo ishiyeke okanye ibambeke ngexesha lokudlala, kunyanzele ukuba ubone isimboli yokulayisha esikrinini. Le nkqubo ibizwa ngokuba “yibuffering,” inkqubo yokulayishwa kwangaphambili kweevidiyo kwisixhobo sememori yesixhobo.
Ngokufanelekileyo, ukulayishwa kwevidiyo kufuneka kwenzeke kakuhle kangangokuba umsebenzisi wokugqibela akafumani naziphi na iingxaki ngexesha lokudlala. Kodwa oku akwenzeki ngalo lonke ixesha ngenxa yezi zizathu zilandelayo:
Isantya se-intanethi esinganelanga
Ewe, isantya sibalulekile. Ababoneleli ngenkonzo ye-Intanethi bahlala bezibandakanya kumadabi anzima, bethembisa abasebenzisi okona kukhutshelwa kwedatha ngesantya esiphezulu ngenxa yesi sizathu. Ukuba i-bandwidth yoqhagamshelo lwakho lwe-intanethi ayiphakamanga ngokwaneleyo, uya kuhlala ubandezeleka kwimiba ye-buffering yevidiyo. Ungajongana nalo mba ukuba imodem okanye umzila wakho uphelelwe lixesha okanye awusebenzi kakuhle. Izixhobo ezininzi kakhulu eziqhagamshelwe kuthungelwano olufanayo ngaxeshanye zingaphosa le mpazamo.
Ugqibele nini ukuphucula umzila wakho? Ngelixa ukuhlaziya i-router yakho kwinguqulelo yamva nje kulungile, ukusebenzisa iirotha ze-firmware ezindala ngamanye amaxesha kungumthombo wemiba. Jonga ukuba iinkcukacha zerouter yakho ziyahambelana na noko i-ISP yakho ikubonelelayo. Kunye nale nto, qiniseka ukuba ikhompyuter yakho ayijongani nayo nayiphi na imiba efana nabaqhubi benethiwekhi abaphelelwe lixesha, iidrive zekhadi legraphic ezonakalisiweyo, isikhangeli sewebhu esingalunganga, njl.
Ukuqhubela phambili, ngoku makhe sizame ukubona indlela yokulungisa ibuffering yevidiyo sisebenzisa izisombululo ezilula.
Uyiyeka njani ibuffering yevidiyo
Kukho izisombululo ezininzi kwingxaki yebuffering yevidiyo, kungoko kuyacetyiswa ukuba uqale kowona lungiso lulula lwezandla (oludweliswe kuqala) kwaye emva koko uye kwelandelayo ukuba edlulileyo ayisebenzi.
1. Jonga isantya se-Intanethi yakho
Ukuba amalungu aliqela asebenzisa i-intanethi kwikhaya lakho, ngokwendalo uya kufuna uqhagamshelo olunesantya esiphezulu, olunokuxhasa umgangatho olungileyo wokusefa kwizixhobo ezininzi ngaxeshanye. Ukujonga ukuba singakanani na isantya esisifumanayo isixhobo sakho (esifumana kuso ividiyo igcina isantya), yenza uvavanyo olulula lwesantya se-intanethi usebenzisa isikhangeli sakho sewebhu. Ukuba isantya sisezantsi kunento oyifunayo, qhagamshelana ne-ISP yakho ngesicwangciso esingcono se-bandwidth.
Vavanya isantya se-intanethi
2. Phuma kwiinkqubo ezisebenza ngasemva
Ukuba ujongene nemiba ephazamisayo kwikhompyuter yakho, jonga umthwalo wangoku wenkqubo yakho ngoMphathi woMsebenzi. Ukuba ikhompyuter yakho igcwele kakhulu imisebenzi kwaye ibonisa ukusetyenziswa kwememori ephezulu, awuzukufumana ukudlala kakuhle kwiividiyo ezisasaziweyo. Ngenxa yokuba izixhobo zekhompyuter zihlala kwenye indawo, ayizukuhambisa iividiyo kakuhle njengoko kufanelekile. Ukoyisa umba, skrola kuluhlu lweenkqubo kwaye ubone ezona zisebenzisa izixhobo ezininzi. Ukuba awuzisebenzisi, zikhethe ngokucofa kube kanye, uze ucofe iqhosha "Ukugqiba umsebenzi" iqhosha ukuphelisa iinkqubo ezinjalo.
Vala iinkqubo ezinobutyebi obusebenza ngasemva
3. Yehlisa umgangatho wevidiyo oyibukeleyo
Akuyomfihlo ukuba ividiyo enesisombululo esiphezulu inkulu ngobukhulu befayile. Ngoku okukhona inkulu isayizi yevidiyo, kokukhona ixesha namandla aya kuthatha ukuyisasaza kwi-intanethi. Ke ukuze uphucule kancinane amava okubukela, zama ukubukela uguqulelo olusezantsi lwesisombululo sevidiyo. Unokufumana ukhetho lokukhetha phakathi kwesisombululo sevidiyo onqwenela ukusibukela kwiNetflix, iYouTube, kunye namanye amaqonga.
Yehlisa umgangatho wevidiyo oyibukeleyo
4. Khuphela ividiyo kwisixhobo sakho
Ukuba akukho nto iyenye isebenzayo, esona sisombululo siya kuba kukukhuphela ividiyo kwindawo yakho yokugcina. Ngale ndlela, kanye nje ukuba ukhuphelo lugqityiwe, uya kukwazi ukubukela ngaphandle kweziphazamiso. Ungazama kwakhona i-hack ilula kwaye ikhawulezayo yokudala isithinteli esikhulu ngokumisa umjelo imizuzu embalwa kwaye uqalise kwakhona emva koko.
Khuphela ividiyo kwisixhobo sakho okanye unqumame ukuze wenze isithinteli esikhulu
Ukhuphelele ividiyo kodwa ayikasebenzi? Zama oku!
Ukuba uzamile kwaye wavavanya iqhinga lokukhuphela ividiyo kodwa ayikadlali kakuhle, ifayile yoqobo elayishiweyo inokonakala okanye yonakaliswe. Kwimeko enjalo, ukuyilungisa ngokuthembekileyo kunye nokusebenza kakuhle isixhobo sokulungisa ividiyo kucetyiswa.
Ngokombono wethu, Ukulungiswa kweStellar kwiVidiyo lolona khetho lubalaseleyo kule meko. Ukulwa neevidiyo ezonakeleyo zayo nayiphi na ifomathi, le software yeyona mpendulo ilungileyo kumbandela “wokuyeka ukubhafa kwevidiyo”. Isixhobo silandela indlela elula yamanyathelo ama-3. Iza ne-interface enembile eyenza ukusebenza nayo kube lula kakhulu.
Nantsi indlela ongasisebenzisa ngayo esi sixhobo ukulungisa ukubonwa kwevidiyo:
Yiya kwiphepha lemveliso elisemthethweni loLungiso lweStellar lweVidiyo kwaye ucofe kwi "Ukukhuphela mahala" unxibelelwano.
Emva kokuba ifayile ikhutshiwe, cofa kabini ukufaka usetyenziso.
Nje ukuba ufakelo lugqityiwe, qalisa ukulungiswa kweStellar kwiVidiyo.
Kujongano lwesoftware, cofa kwibhokisi ethi "Yongeza iFayile" ukongeza ifayile yevidiyo efuna ukulungiswa. Unokongeza iifayile ezininzi apha.
Ukulungiswa kweStellar kwisikrini sasekhaya sevidiyo (https://www.stellarinfo.com/onlinehelp/en/stellar-repair-for-video-win-4/)
Emva kokongeza iifayile kwisixhobo, cofa kwi "Lungisa" iqhosha ukuqalisa inkqubo yokulungisa.
Ukulungiswa kweStellar kwiifayile zeVidiyo eziza kulungiswa zongezwa (https://www.stellarinfo.com/onlinehelp/en/stellar-repair-for-video-win-4/)
Ibar yenkqubela phambili iya kuboniswa ukubonisa ukuba ingakanani inkqubo egqityiweyo.
Ukulungiswa kweStellar yenkqubela phambili yokulungiswa kweVidiyo
Emva kokuba iifayile zevidiyo zilungisiwe, ungazijonga kwangaphambili ngaphambi kokuba uzigcine kwikhompyuter yakho.
Ukulungiswa kweStellar kwividiyo yokujonga kuqala ividiyo ngaphambi kokugcina (https://www.stellarinfo.com/onlinehelp/en/stellar-repair-for-video-win-4/)
Emva kokuba ifayile yevidiyo ekhutshelweyo ilungisiwe, zama ukuyidlala. Ngokufanelekileyo, akufuneki ujongane nayo nayiphi na imiba yevidiyo ngoku.
Ukugcina ividiyo buffering ngumba othwaxa wonke umsasazi womxholo we-intanethi. Kodwa okuvuyisayo kukuba, ngoku kukho isicombululo kulo mbandela! Ukongeza ekujongeni isantya se-intanethi kunye nokuvala usetyenziso lwangasemva, ukukhuphela ividiyo kwinkqubo yakho yasekhaya nako kunokuzanywa. Ukuba ividiyo ekhutshelweyo nayo iyasilela ukudlala, ungathandabuzi ukuyilungisa ngesixhobo esinjengokulungiswa kweStellar yeVidiyo ukulungisa ukubonwa kwevidiyo.